अघिल्लो: बाइबल परमेश्‍वरको कामको गवाही हो। हामी प्रभुमा विश्‍वास गर्नेहरूले आकाश र पृथ्वी अनि सबै थोक परमेश्‍वरद्वारा सृष्टि गरिएका हुन् भनेर बाइबलकै आधारमा स्वीकार गर्छौं। बाइबलकै कारण तिनीहरूले परमेश्‍वरका कामहरूको आश्चर्य, महान्‌ता, र सर्वशक्तिसम्पन्नतालाई देख्छन्। त्यति मात्र होइन, बाइबलमा परमेश्‍वरका धेरै वचनहरू र मानिसको अनुभवका गवाहीहरू छन्, जसले मानिसको जीवनका लागि प्रबन्ध गर्न सक्छ, र मानिसलाई धेरै सुधार गर्न सक्छ। के हामी बाइबल पढेर अनन्त जीवन पाउन सक्छौं? वा के बाइबलमा अनन्त जीवनको बाटो छ?
अर्को: पावलले बोलेका “सम्पूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्‍वरको प्रेरणाबाट दिइएको हो” (२ तिमोथी ३:१६) भन्‍ने वचनहरूको आधारमा धार्मिक संसारका पाष्टरहरू र एल्डरहरूले बाइबलका वचनहरू परमेश्‍वरका वचनहरू हुन् भनी विश्‍वास गर्छन्। तैपनि तपाईं बाइबलमा भएका सबै वचनहरू परमेश्‍वरका वचनहरू होइनन् भनी भन्नुहुन्छ। तपाईंले के भन्न खोज्नुभएको हो?